Screenshots များနှင့်ဓာတ်ပုံများ | November 2019
အဓိက Screenshots များနှင့်ဓာတ်ပုံများ
PC အတွက်ဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာများ၏အမျိုးမျိုးမည်သူမဆိုငုတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသင့်လျော်ကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ကအသုံးပြုသူများ၏မတူကွဲပြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း5အရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာများ၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုဆက်ကပ်။ ဓာတ်ပုံပြပွဲ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေနဲ့ program ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ် - ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ Movavi တည်းဖြတ်ဓာတ်ပုံရိုက်အစီအစဉ်များရွေးချယ်ရေး။
မင်္ဂလာပါ အကယ်စင်စစ်အိမ်တော်၌လူတိုင်းစသည်တို့ကိုဟောင်းဓာတ်ပုံတွေ (ဖြစ်ကောင်းပင်အလွန်အသက်ကြီးလည်းမရှိ), အချို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှေးမှိန်, ချို့ယွင်းချက်ရှိပြီး အချိန်က၎င်း၏သေဆုံးသူကြာ, သူတို့သည် "အရေအတွက်ကျော်ဖြတ်" (သို့မဟုတ်သူတို့ထဲကတစ်ဦးမိတ္တူစေ) မဟုတ်လျှင်, အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက် - ဤဓာတ်ပုံများ (ကံမကောင်း) ကိုအစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်စေနိုင်သည်။
(သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သီးနှံလှည့်, etc, ရောင်ပြန်ဟပ်) ကိုတစ်ကြိမ်မှာအတော်ကြာပုံရိပ်တွေ၏အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ ထိုပြဿနာကိုမြင်ယောင်ကြည့်: သင် image ကို (ဥပမာ 10 px) ၏အစွန်းကိုချုံ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ထို့နောက်အခြား format နဲ့ကအရွယ်အစားပြောင်းလဲပြီးကယ်တင်သောကြောင့်လှည့်။ မည်သည့်ပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာ (Windows ကို default အတွက်ရရှိနိုင်သည့်သင့်လျော်သောပင် Paint,) ကိုဖွင့်ပြီးလိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုသုံးစွဲ - ဒါဟာမခက်ခဲဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ဘယ်လို Windows တွင်မျက်နှာပြင်ရဲ့ screenshot (စခရင်ပုံ) လုပ်ပါ။ စခရင်ပုံအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်အဘယ်သို့ပြုသနည်း
နေ့သည်ကောင်းသော! လူကြိုက်များသည်ပညာကို: တစ်ချိန်ကချင်မှာမဟုတ်ဘူး (သို့မဟုတ်ပါကလိုအပ်သောပါလိမ့်မယ်) မျက်နှာပြင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အရာမျှထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာရှိပါ! ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးစခရင်ပုံ (သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံ) ကင်မရာ၏အကူအညီမပါဘဲပြု - Windows တွင်အတော်လေးအနည်းငယ်လုပ်ရပ်များ (သူတို့ကိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အကြာတွင်ဤဆောင်းပါး၌) ။ ထိုအပုံ၏မှန်ကန်သောအမည်ဖြင့် - (ရုရှားထုံးစံ၌ - "စခရင်ပုံ") screenshot ။
Screenshots များအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်။ မျက်နှာပြင် 1 စက္ကန့်။ !
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့တွင်အဘယ်သူသည်သင့်ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာမဆိုဇာတ်လမ်းတွဲဖမ်းဆီးဖို့လိုချင်သည်မဟုတ်လော ဟုတ်ကဲ့နီးပါးတိုင်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူ! သင်, သင်တန်း၏, မျက်နှာပြင်ရဲ့ပုံကိုယူ (သို့သော်ဒီအလွန်းဖြစ်ပါတယ်!) နိုင်ပြီး, သငျသညျထို program ၏လျှပ်တစ်ပြက်ယူနိုင်သည် - သည်, စနစ်တကျပုံ (ထိုစကားလုံးအင်္ဂလိပ်ထံမှကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ် - screenshot) လို့ခေါ်တဲ့ဖို့ဘယ်လို ... သင်ကဆက်ဆက်စကားမစပ် (မိမိတို့၏ screenshots များဖန်တီးနိုင် သေး) "ဖန်သားပြင်" ဟုခေါ်သည်ကတခြားပေါ်နှင့်ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ "ကို manual mode ကို" (များတွင်: https: // pcpro100 ။
https://termotools.com my.termotools.com © Screenshots များနှင့်ဓာတ်ပုံများ 2019